10 taona ny MNP: nitombo avo roa heny ny mpitsidika ireo valanjavaboahary | NewsMada
10 taona ny MNP: nitombo avo roa heny ny mpitsidika ireo valanjavaboahary
Nitondra fampandrosoana ho an’ny fokonolona monina mipetraka manodidina ny valanjavaboary 43 ny tetikasa maro natao tantsoroka miaraka amin’ny Madagascar National Parks tao anatin’ny 10 taona.
10 taona ny nitondran’ny Madagascar National Park (MNP) ny anarany izay Association nationale pour la gestion des aires protégées (Angap) teo aloha. Betsaka ny ezaka natao ho fanomezan-danja ny fampahafantarana ny harena misy eto amintsika ao anatin’ny valanjavaboahary 43 tantanan’ny MNP manerana ny Nosy. Na teo aza ny olana samihafa niseho, nitombo avo roa heny ny isan’ny mpitsidika ny vala satria nahatratra 190 812 ny taona 2017 raha 135 630 ny taona 2008. Nitondra fampandrosoana ho an’ny tanàna manodidina ny fisian’ny vala ary atao ao ny asa rehetra. Niroborobo ny asa fitarihan-dalana, nivoatra nanaraka ny toetrandro. Porofon’izany ny fanitarana ny trano fandraisam-bahiny ao Andasibe sy ao Ranomafana ary fitomboan’ny isan’ny mpitari-dalana ho 100%.
Vokatry ny ezaka, nahazo fankasitrahana tamin’ny fanasokajiana ho site Ramsar sy « reserve biosphère » ny vala efatra.
Mampiavaka ny fiasan’ny MNP ny fiaraha-mitantana miaraka amin’ny Vondron’olona ifotony monina manodidina ny valanjavaboary. Tanjona ny hampandray anjara ny fokonolona amin’ny alalan’ny komity ifotony ho an’ny vala (CLP) sy ny komity manao tantsoroka ny valanjavaboary (Cosap). Nisy ny fametrahana fotodrafitsa mitondra voka-tsoa mivantana ho an’ny vahoaka toy ny tohodrano, ny sekoly, ny fampidirana rano madio fisotro, ny fametrahana tobim-pahasalamana… Nahatratra 80 ny vita tao anatin’ny 10 taona. Ankoatra ny fotodrafitrasa, 28 000 ny tokantrano nisitraka tetikasa madinika ka novatsin’ny MNP vola ny fanatanterahana. Tao ny fiompiana, ny fanaovana asa tanana, ny voly legioma sy anana.
361 ny fokontany nahazo tombontsoa mivantana vokatry ny tetikasa fanohanana ny fampandrosoana mifototra amin’ny sosialy sy ny tontolo iainana ho fanonerana ny vola teo aloha tsy niditra tamin’ireo mponina rehefa nijoro ny vala.
Vola 3 miilara Ar nanamboarana lalana
Ho fampandrosoana ny fampihodinana ny vala, nanokana vola mitentina 3 miliara Ar ny MNP nanamboarana ireo lalana sy tetezana ahafahan’ny mpitsidika mandeha amin’ny vala sivy. Amin’izao fotoana izao, 1 000 ny mpiasa mampihodina ny asa fikarakarana ny vala sy ny fiarovana ny harena ao anatiny.